जीवनको वीणा कसरी बजाउने ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ श्रावण २०, मंगलवार ०९:४८ गते
धर्तीका हरेक वनस्पति, कीटपतङ्ग, पशुप्राणी, जीवजन्तु र मनुष्य, सबैभित्र अपार ऊर्जा र सम्भावना लुकेको हुन्छ । हरेकभित्र रहेको त्यही ऊर्जा नै उसको जीवनको आधार हो । जीवन भन्नु नै ऊर्जाको अर्को नाम हो । जडभित्र कुनै पनि सम्भावना हुँदैन । बसउठ, हिँड्डुल, घुमफिर, विकास, उन्नति आदि नहुँदा वस्तुहरु जड हुन पुग्दछन् ।
गति नहुनु पनि जडता हो । गतिशील विषयहरु सबै जीवन्त हुन्छन् । जडता भनेको त आलस्य हो, प्रमाद हो, गतिहीनता हो । जहाँ गति छ, चाल छ त्यहाँ नै जीवन छ । मनुष्य बाँच्नु र नबाँच्नुको प्रमाण पनि उसको गतिशीलता वा गतिहीनता नै हो । मनुष्यका सन्दर्भमा जीवन हुनुमात्र पनि जीवन होइन । मनुष्य बाँचेको छ भन्ने भनाइको लक्ष्यार्थ पुरूषार्थ, उन्नति र विकासका साथ ऊ जीवित छ भन्नु हो । व्यक्तिभित्रको जाँगर, जोस, साहस र उत्साह उसको गतिशीलताका सूचक हुन् । जाँगर र उत्साहका बलमा नै व्यक्ति बाँच्दाबाँच्दै मर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन पुग्दछ ।
जाँगर भनेको त्यो शक्तिको नाम हो जसले निरन्तर आफ्नो ऊर्जालाई सक्रिय तुल्याइरहन चाहन्छ । जसरी हामी निदाउँदा पनि हाम्रो मुटुको स्पन्दन रोकिँदैन, जाँगर पनि त्यसरी नै अविरल प्रवाहित हुने गर्दछ । जाँगरले हामीलाई सधैँ हाम्रो सम्भावनाको नजिक रहने वातावरण तयार पार्दछ । जागृत हुनु भनेकै आफ्नो शक्ति, प्रतिभा र ऊर्जालाई सक्रिय तुल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा जान्नु र बुझ्नुको अवस्था हो ।
जाँगर अथवा उत्साहबराबरको योग्यता मनुष्यको सायदै अर्को होला । यही उत्साहको बलमा उसले जीवनको कायापलट गर्न सक्छ, अनि यही उत्साहको बलको अभावमा उसको जीवन निरर्थक र जडवत् पनि बन्न पुग्दछ । अभाव, रोग, भोक, शोक, असफलता, दुःख र अप्ठ्याराहरु उत्साह–बलको अभावमा उत्पन्न जडताका परिणतिहरु हुन् ।
हाम्रो जाँगरले हामीभित्रको सम्पूर्ण योग्यतालाई फुलाउने र फलाउने गर्दछ । हामीभित्र भगवान् बन्ने योग्यता छ तर हामीले त्यसलाई जान्न र चिन्न सक्नुपर्दछ । हाम्रो उत्साह, जाँगर र निरन्तरको साधनाले नै हामी आफ्नो स्वरुपको दर्शन गर्न सफल बन्दछौँ । आलस्यले हामीलाई जिउँदै मारिदिन्छ । हामीलाई निकम्मा र पत्रु बनाएर एउटा कुनामा मिल्क्याइदिनु नै आलस्यको धर्म हो, तर जाँगरले हामीलाई सबैका बीचमा पुग्न सहयोग पु¥याउँछ ।
जब हामीभित्रको ऊर्जा बाहिर आउँछ त्यतिखेर हामी सबैका आशा र विश्वासका केन्द्र भइरहेका हुन्छौँ । हाम्रो सङ्कीर्णताको परिधि छिन्नभिन्न भएको हुन्छ र हामी असीममा प्रवेश गरेका हुन्छौँ । हामी विन्दुबाट सिन्धुमा बदलिन्छौँ, बन्धनबाट व्यापकमा बदलिन्छौँ, जब हाम्रो शक्ति बाहिर आउँछ । हामीले बाल्ने बिजुली बत्तीको स्रोत पानी हो । बाहिर हेर्दा पानीमा कतै बिजुली देखिँदैन, कुनै उज्यालो देखिँदैन । बाहिर हेर्दा उज्यालो नदेखिनुको अर्थ नदीमा उज्यालो छैन भन्ने होइन । नदीको पानीलाई बिजुलीमा बदल्न जाँगर चाहिन्छ, साहस र शक्ति चाहिन्छ । निरन्तरको साधना र श्रमको परिणाम नै उज्यालो हो ।
जाँगर र उत्साहको एउटा लामो प्रक्रिया पार गरेपछि मात्र नदीको पानी उज्यालोमा बदलिन्छ । जब नदीको पानी बत्ती बनेर उज्यालिन्छ तब जगत्को सारा अँध्यारो हराउँछ । नदीको गहिराइमा रहेको बिजुली उसको सम्भावना हो, ऊर्जा हो । त्यही ऊर्जा बाहिर प्रकट हुँदा अँध्यारामा बाँच्न विवश मानिसहरुले उज्यालोको अनुभव गर्दछन् र जीवनलाई धन्य बनाउँदछन् ।
नदीमा जस्तै हरेक मनुष्यभित्र उज्यालो छ । जब त्यो ऊर्जा चलायमान हुन्छ त्यसपछि मात्र बाहिरको जगत्ले उज्यालोको अनुभव गर्दछ । हामीभित्रको ऊर्जालाई चलायमान र गतिशील बनाउने काम हाम्रो हो । हाम्रो देश नदी नै नदीले भरिएको देश हो । जलसम्पदाको अपार भण्डार छ यहाँ तर उज्यालो छैन । कारण, हामीसँग जाँगर छैन, उत्साह र कामप्रतिको लगनशीलता छैन ।
हामीसँग ऊर्जाको अभाव छैन, शक्ति र स्रोतको पनि अभाव छैन । अभाव छ भने केवल जाँगरको छ, उत्साह र श्रमको छ । हामी निदाएका हुनाले यति धेरै उज्यालो भएर पनि अँध्यारोमा बाँच्न विवश छौँ । हामीसँगको अँध्यारो हाम्रै आलस्यको उपज हो । स्रोत भएरमात्रै हुँदैन । जीवन हुनुमात्रै ठूलो कुरा होइन, जीवनको ऊर्जा सदुपयोग ठूलो कुरा हो । बिघौँबिघा जमिन भएर पनि खान नपाएका मान्छे छन् र थोरै जमिन भएर जीवनको गुजारा राम्ररी चलाउने पनि प्रशस्तै छन् ।
एउटा घरमा वीणा थियो । त्यस घरको मालिकका बाबुले त्यही वीणा बजाएर आनन्द लिने गर्दथे । ती वृद्धको निधन भएको पनि वर्षौं बितेको थियो, वीणा घरको एउटा कुनामा त्यसै मिल्किएको थियो । कहिलेकाहीँ साना केटाकेटी गएर वीणाको तार चलाउँदा घरै थर्कने गरी आवाज आउँथ्यो । घर मालिकलाई भने केटाकेटीले चलाएर हैरान पारेका हुँदा वीणा देख्यो कि रिस उठ्दथ्यो । घरमा यदाकदा पाहुना आउँदा पनि वीणा बजाएर हल्ला गर्लान् भन्ने ठानेर कोठाको कुनामा नभेटिने गरी लुकाइदिने गर्दथे ।
एकदिन घर मालिककी श्रीमतीले बढारकुँढार गर्ने क्रममा घरको कुनामा राखिएको वीणा देखिन् । वीणा राखिएको ठाउँमा फोहरैफोहर थियो । उनलाई वीणा ढाँड बन्न पुग्यो । एकातिर मिल्किएको वीणा देख्नेबित्तिकै उनको टाउको दुख्न थाल्यो । केही समयपछि बूढाबूढी मिलेर घरको पर्खालबाहिर फोहर फाल्ने ठाउँमा लगी वीणालाई फ्याँकिदिए । वीणा फ्याँकिदिएपछि बूढाबूढीले घर सफा र स्वच्छ भएको अनुभव गरे ।
गर्मीको दिन थियो । एक साँझ परिवारका सबै भोजन गरी विश्राम गर्दै थिए । कता कताबाट सङ्गीतको सुमधुर नाद गुन्जिँदै उनीहरुको कानसम्म आइपुग्यो । सबै मस्त भए । कताबाट यस्तो आवाज आयो भनेर खोजी गर्दा उनीहरुले थाहा पाए— एउटा भिखारी उनीहरुको पर्खालबाहिर फोहर फाल्ने ठाउँमा बसेर वीणा बजाइरहेको छ । भिखारीले अत्यन्त अद्वितीय र लोभलाग्दो सङ्गीत सिर्जना गरिरहेको थियो । वीणा बजाउँदा आएको सुमधुर सङ्गीतको दिव्य रागमा ऊ समाधिस्थ बनेको थियो ।
घरको पर्खालबाहिर निस्किएर घर मालिकले हेर्दा देख्यो, ऊ स्वयम्ले फ्याँकेको वीणाबाट त्यो सुमधुर राग बाहिर निस्किइरहेको छ र एउटा भिखारी त्यही रागमा आँखा चिम्लिएर मस्तसँग वीणा बजाइरहेको छ ।
आपैmँले फ्याँकेको वीणाबाट झङ्कृत त्यो सङ्गीतमय एवम् दिव्य झङ्कार सुनेर त्यस घरको मालिकले आँखाबाट दुई थोपा आँसु तप्प झा¥यो । घर मालिककी पत्नीलाई पनि पछुतो लागेर आयो । घर मालिकले भिखारीतिर फर्किएर भन्यो, ‘भाइ, यो वीणामा यति मीठो सङ्गीत लुकेको रहेछ, हामीलाई थाहै भएन । हामी त केटाकेटीले कहिलेकाहीँ यसको तार हल्लाउँदा निस्कने चर्को आवाजका कारण वाक्क भएर फालिदिएका थियौँ । यति मीठो स्वर भएको वीणा हामीलाई ढाँड हुन पुग्यो । आज तिमीले हाम्रा आँखा खोलिदियौ । तिमीलाई धेरैधेरै धन्यवाद !’
भिखारीका औँला वीणाका तारबाट बाहिर आए । बिस्तारै उसका दुवै आँखा खुले । समाधिबाट भर्खरै ब्युँझेको योगीले भैmँ शान्त स्वरमा भिखारीले घर मालिक र उसकी श्रीमतीतिर फर्किएर भन्यो, ‘महोदय, वीणामा खासै केही पनि छैन । तारहरु त केवल आवरण मात्र हुन् । वीणा आपैmँमा जड वस्तु पनि हो । हामीले जस्तो औँला लिएर तार चलाउँछौँ, त्यहाँबाट त्यस्तै आवाज आउँछ । मैले सङ्गीत भरिएको औँला लिएर यसलाई चलाएको थिएँ, त्यसैले यहाँबाट पनि यस्तै आवाज आयो । हामीजस्ता छौँ, वीणाको तार पनि त्यस्तै भइदिन्छ ।’ यति भनेर भिखारीले आँखा बन्द ग¥यो र वीणाका तारमा औँला राखी सुमधुर सङ्गीतको राग सिर्जनातिर लाग्यो ।
घर मालिकसँग केवल पश्चात्ताप बाँकी थियो । उसले सोच्यो, ‘मैले विचारै नगरी यति महँगो र सुन्दर स्वर भएको वीणालाई व्यर्थ गुमाएँ ।’ वीणा बजिरहेको थियो । केही समयपछि घर मालिक पनि एक छेउमा बसेर वीणाको नादसङ्गीतमा भिखारीसँगै एकीकृत हुन सुरू ग¥यो ।
हामीसँग पनि जीवनको वीणा छ । यसलाई हामीले जसरी बजाउँछौँ, त्यसैगरी बज्दछ । हामीले बिर्सन नहुने कुरा हो— वीणासँगै वीणा बजाउने पनि हुन्छ । वीणाबाट गुन्जिएको स्वर वीणाको होइन, वीणा वादकको हो । वीणाले त वादकलाई अभिव्यक्त गरिदिने गर्दछ । वीणा बजाउनेले जुन सुरमा तारहरुमा औँला चलाउँछ, वीणाले त्यही सुर बोलिदिन्छ । वीणा बजाउनेले जुन गतिमा वीणाका तार चलाउँछ, वीणा पनि त्यही गतिमा हिँडिदिन्छ । वीणाका तारहरुको चालक नै वीणाको मूल हो ।
हाम्रो जीवनका पनि हामी चालक हौँ । हाम्रो जीवनरुपी वीणाले हाम्रो सुर, ताल, गति, आरोह–अवरोह सबै बोलिदिन्छ । यसैले, हाम्रो जीवनको तार कति कस्ने, कसरी बजाउने, कुन गतिमा बजाउने यी सबै कुराका निर्धारक हामी हौँ । हाम्रो जीवन सफल र असफल हुुनुपछाडि केवल हामी जिम्मेवार हुन्छौँ । जाँगर, उत्साह र साहस भए जीवन सुखमय हुन्छ, अन्यथा दुःखमय जीवन बाँच्नबाट हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
आपूmले आपैmँलाई चिन्न नसक्नु ठूलो दुर्भाग्य हो । अधिकांश मानिस यही दुर्भाग्यको सिकार भएको अवस्था छ । आपूmलाई बिर्सिएर बाँच्नुको के अर्थ ? आफ्नो अपार सम्भावनालाई बिर्सेर बाँच्नुको के औचित्य ? आज हामीले जीवन—वीणालाई कसिङ्गर बनाएका फोहर फाल्ने ठाउँमा फालेका छौँ । जब जीवन नै हाम्रालाई ढाँड बन्न थाल्दछ, बोझ बन्न थाल्दछ, त्यसपछि के नै बाँकी रहन्छ र ?
मह¤वाकाङ्क्षा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईष्र्या, प्रमाद, आलस्यजस्ता दुर्गुणहरुका कारण जब हाम्रो जीवन—वीणाको तार कसिन्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट निस्कने चर्को आवाजमा त्यहाँको सङ्गीत हराउँदछ । जाँगर, उत्साह, प्रेम, करूणा, दया, सहयोगजस्ता औँलाले जीवन—वीणाका तारहरु बजाउने हो भने मात्र त्यहाँबाट सुमधुर एवम् स्वस्थ सङ्गीतमा समाधिस्थ हुन सकिन्छ ।
जीवन साँच्चै नै अद्भुत छ । यसको गहिराइबाट निकाल्न सकिने उज्यालोको कुनै हिसाब छैन । कल्पनामा पनि अटाउन नसक्ने सम्भावनाको पवित्र नदी हो जीवन । जीवनको उज्यालो निकाल्न श्रममा जुट्नुको कुनै विकल्प छैन, कुनै उपाय छैन । बसीबसी जीवननदीको गहिराइबाट आपैmँ उज्यालो बाहिर निस्कनेवाला छैन । आलस्यले रास लागेको छ । यही आलस्यले सबैतिर अँध्यारो नै अँध्यारो बनाएको छ ।
स्वयम् हामी, हाम्रो सहर, हाम्रो गाउँ र हाम्रो देशसँगै यो शताब्दीमा पनि अँध्यारोको निष्पट्ट औँसीमा बाँच्न विवश छौँ । प्रकृतिमा समेत १५ दिन अँध्यारो र १५ दिन उज्यालो हुन्छ तर हामीकहाँ चौबिसै घन्टा अँध्यारो छ । यस्तो लाग्दछ, समाज, देश र स्वयम् हाम्रो जीवनबाट पनि शुक्लपक्ष हराएको छ र केवल औँसीले डेरा जमाएको छ । यसरी हाम्रो जीवन लोडसेडिङको मारमा नराम्ररी पिल्सिएको छ । यति धेरै जलसम्पदाका भण्डारी भएर पनि हामीसँग भने केवल अँध्यारो छ । कस्तो विडम्बना !!
आउनुस्, अब लोडसेडिङ कम गर्नेतिर लागौँ । छिमेकीसँग पैँचो मागेको बिजुलीले कहिलेसम्म चलाउने ? पानी नै पानीमाथि बसेर मरूभूमिमा बाँचेकाहरुसँग उल्टै बिजुली पैँचो ? योभन्दा ठूलो दुुर्नाम के हुन सक्छ ? के ‘ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्’ अर्थात् श्रम नगर्ने तर ‘ऋण गरेर पनि घिउ पिउनुपर्छ’ भन्नु नै ‘बहादुर’ हुनु हो ? होइन । हामी अब जाँगरिलो बन्नुछ, उत्साही बन्नुछ, मिहिनेती बन्नुछ र उज्यालो भित्र्याएर जगत् र जीवनको लोडसेडिङ हटाउनुछ । सधैँभरि अर्काका अगाडि ‘साष्टाङ्’ गर्नुभन्दा उत्साही र जाँगरी बनेर आफ्नै उज्यालो बाल्नतिर लाग्नुछ । यही नै लोडसेडिङ हटाउने उपाय हो । हाम्रा छिमेकीहरु मरूभूमिबाट पनि उज्यालो जन्माएर जलसम्पादाका भण्डारीहरुलाई बेचिरहेका छन्, तर जलसम्पदाका भण्डारीहरु भने लोडसेडिङको नियति बाँच्न विवश छन् । यो आलस्यको चरमोत्कर्ष हो । आउनुस्, जाँगरका बलमा जीवनको लोडसेडिङ हटाऊँ, जीवनवीणाको सुमधुरतम सङ्गीत गुनगुनाएर जीवनलाई नै धन्य बनाऔँ ।